Ị̀ Chọrọ Ka Gị na Chineke Dị ná Mma?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Ọ bụrụ na gị na Chineke adịrị ná mma, obi ga na-eru gị ala, ọ gaghịkwa adị gị ka ò nwere ihe kọrọ gị. Ọ ga na-adị gị ka Chineke ọ̀ na-achọ ka ihe na-agaziri gị mgbe niile.”—CHRISTOPHER, NWA OKOROBỊA BI NA GANA.
“Chineke na-ahụ nsogbu gị niile, ọ na-agbatara gị ọsọ enyemaka karịa otú ị tụrụ anya ya.”—HANNAH, NWATA NWAANYỊ DỊ AFỌ IRI NA ATỌ BI N’ALASKA, N’AMERỊKA.
“O nweghị ihe dị ka mmadụ ịmara na ya na Chineke dị ná mma n’ihi na ahụ́ na-eru onye ahụ ala ma ya na Chineke dịrị ná mma.”—GINA, NWAANYỊ JAMEIKA DỊ IHE DỊ KA AFỌ IRI ANỌ NA ISE.
Ọ bụghị naanị Christopher, Hannah, na Gina chere na ha na Chineke dị ná mma. N’ebe niile n’ụwa, obi siri ọtụtụ ndị ike na Chineke bụ enyi ha. Gịnwa kwanụ? Ọ̀ dị gị ka gị na Chineke ọ̀ dị ná mma? Ka ị̀ chọrọ ka gị na ya dịrị ná mma ma ọ bụkwanụ dịrịkwuo ná mma? Ma, i nwere ike na-eche, sị: ‘Mmadụ nkiti na Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile hà nwere ike ịdị ná mma? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ihe mmadụ ga-eme ka ya na Chineke dịrị ná mma?’
GỊ NA CHINEKE NWERE IKE ỊDỊ NÁ MMA
Baịbụl mere ka anyị mata na mmadụ na Chineke nwere ike ịdị ná mma. Baịbụl kwuru na Chineke kpọrọ onye Hibru aha ya bụ Ebreham “enyi m.” (Aịzaya 41:8) Ihe ọzọ bụ na a gwara anyị na Jems 4:8, sị: “Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu nso.” Nke a pụtara na mmadụ na Chineke nwere ike ịdị ná mma ma ọ bụkwanụ bụrụ enyi. Ma, ebe ọ bụ na mmadụ enweghị ike ịhụ Chineke anya, oleezi otú ị ga-esi ‘bịaruo’ ya nso, gị na ya adịrịkwa ná mma?
Ka anyị leba anya n’otú mmadụ na ibe ya si ebido ịbụ enyi n’ihi na ọ ga-enyere anyị aka ịmata azịza ajụjụ a. Ihe mbụ mmadụ abụọ chọrọ ịbụ enyi na-ebukarị ụzọ eme bụ ịmata aha ibe ha. Ha na-amalitezi ikwurịta okwu, na-agwa ibe ha ihe ha chere na otú obi dị ha. Ha na-ejizi nwayọọ nwayọọ bụrụ enyi. Ọ bụrụ na ha abụọ agbalịa na-enyere ibe ha aka, ha ga-abụzi ezigbo enyi. Ọ bụkwa otú a ka Chineke na onye chọrọ ka ya na ya dịrị ná mma nwere ike isi dị ná mma. Ka anyị leba anya n’ihe mere anyị ji kwuo otú ahụ.
Chineke si na Baịbụl na-agwa anyị onye ọ bụ. Ọ sịrị: “Abụ m Jehova. Ọ bụ ya bụ aha m.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ̀ Dị Gị Ka Gị na Chineke Ọ̀ Dị ná Mma?
NDỊ NA-AGỤ AKWỤKWỌ ANYỊ NA-AJỤ, SỊ Olee Ihe Ndị I Kwesịrị Ịma Banyere Krismas?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Gị na Chineke Nwere Ike Ịdị ná Mma
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Gị na Chineke Nwere Ike Ịdị ná Mma
ỤLỌ NCHE Gị na Chineke Nwere Ike Ịdị ná Mma